Ejipta: Bitsika Enti-manao Hosoka Fanadinana Any Amin’ny Lisea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2012 11:44 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Français, فارسی, Español, Ελληνικά, 日本語, English
Ao amin'ny Twitter, manoratra i Ramy Yaacoub hoe :
@RamyYaacoub: “Mitrandraka ifotony” ireo mpianatra eny amin'ny lisea mba hamaliana ireo laza adina nitete, andro faha-2, mandà izany ny Min. fanabeazana #Egypt araho ny @waelabbas hahalalàna bebe kokoa
Ny voka-panadinana famaranan-taona amin'ny lisea no mamaritra ny finoan'ireo mpianatra manerana ny tontolo Arabo. Henjana ny fifaninanana hahazo ny laharana any aloha satria antoka amin'ny fidirana eny amin'ireo anjerimanontolo izany. Analiny ankehitriny ireo mpianatra no miatrika ny fanadinana farany ao Ejipta. Mitohy hatramin'ny 4 Jolay ny fanadinana.
Wael Abbas, bilaogera ela nihetezana, milaza hoe [ar]:
@waelabbas: Haha! Manana tenifototra ampiasainy ao amin'ny Twitter hanaovana hosoka amin'ny fanadinana ireo mpianatra miatrka ny fanadinana farany. Tsy mitsahatry ny mihomehy aho. Ianianako aminareo fa tsy vazivazy ity an.
Ary hoy izy manampy :
@waelabbas: Avy ao anaty efitranom-panadinana ireo ankizy no mandefa bitsika. Haha! Raha izao no izy dia ho vitan-dry zareo ny hibahana ny Twitter.
Asmaa dia mizara izay tahotra izay koa. Manoratra izy :
@asmaaia: Enga anie Allah hanafay anareo! Noho ny fihetsikareo, hakaton-dry zareo ny Twitter. Dia aiza izany no hikamenona ? Dia hiverina amin'ny Facebook na hampiasa Google Plus indray isika izany.
Dikasarinà hafatra tamin'ny Blackberry miaraka amin'ny valim-panontaniana nakarin'i Wael Abbas tao amin'ny Twitter
Abbas dia mihantsy Ministeran'ny Fanabeazana, izay tomponandraikitramin'ny fanadianana, amin'ny filazana hoe :
@waelabbas: Ananako ny fanontaniana rehetra amin'ny fanadinana manontolo!!! Raha ny marina dia ao amin'ny blackberry messenger ny valiny marina rehetra ary dikarain'ny fàfana ity.
@waelabbas: Hatreto dia dikarasin'ny fàfana ahitàna ny laza adina teny Anglisy ho an'ny mpianatra eny amin'ny lisea no azoko, ary ora iray sy sasany sisa dia hifarana ny fanadinana. Misy olona hitory va re ?
Minitra vitsy taorian'io, mibitsika indray izy:
@waelabbas: Dikasarinà fàfaa miisa 72 izao no ananako ho an'ny lasa adina teny Arabo sy finoana
Amin'ny fotoana anoratana ity lahatsoratra ity, ny adina teny Anglisy dia efa vita ary Abbas dia teo an-dalan'ny fampakarana ny dikasarin'ireo laza adina nitete ho ao amin'ny Facebook eto.
Mandritra izany, Mahmoud Nasef manontany hoe :
@m7moudnasef: Misy tenifototra iray ikambanan'ireo mpianatry ny lisea mpiray tarika manao hosoka. Tsy ity ve izany no andian-taranaka hitondra amin'ny dingana manaraka? Aiza ny Ministeran'ny Fanabeazana amin'ity sangy ratsy ity?
Ny tenifototra ampiasaina hanaovana ilay hosoka dia azo jerena ato.